टाईब्रेकरमा पेरुलाई पराजित गर्दै कोलम्बिया कोपाको सेमीफाईनलमा
२०७३ असार ४ शनिबार, काठमाडौं। कोलम्बिया कोपा अमेरिका फुटबलको सेमीफाईनलमा प्रवेश गरेको छ। पेरुलाई टाई-ब्रेकरमा ४-२ गोलले पराजित गर्दै कोलम्बियाले सेमी फाईनलमा स्थान पक्का गरेको हो। सन् २००४को कोपा पछि कोलम्बियाले पहिलो पटक सेमीफाईनलको यात्रा तय गरेको हो। अमेरिकामा जारि कोपा अमेरिका फुटबलको दोस्रो क्वार्टरफाईनलखेलको निर्धारित ९० मिनेटको खेल बराबरीमा सकिएपछि खेल टाईब्रेकरमा गएको थियो। पेरुका २ जनाले पेनाल्टीमा गोल गर्न नसकेपछि १ पेनाल्टी बाँकी रहँदै क ... बाँकी अंश»
टर्की बिरुद्धको जित पछि उपाधि दावेदार स्पेन लयमा फर्कियो
२०७३ असार ४ शनिबार, काठमाडौं। आलोचनाको शिकार भैरहेका स्पौनी स्ट्राईकर आलवेरो मोराटाको २ गोलको मदतले टर्कीलाई ३-० गोलले हराउँदै स्पेनले नक आउट चरणमा स्थान पक्का गरेको छ। युरो २०१६ फुटबल प्रतियोगितामा समुह 'डी' मा भएको स्पेन र टर्की बिरुद्ध जित हासिल गर्दै स्पेन ६ अंकका साथ अंक तालिकामा प्रथम रहँदै 'राउण्ड अफ सिक्सटिन'मा स्थान पक्का गर्न सफल भएको हो। क्रोएसिया र चेक गणतन्त्रले अंक बाँडेपछि स्फेनको दोस्रो चरणमा जाने पक्का भएको हो। खेलको ३४औं मिने ... बाँकी अंश»
अन्तिम समयको गोलले क्रोएसिया चेक बिरुद्ध बराबरीमा रोकियो
२०७३ असार ४ शनिबार, काठमाडौं।दुई गोलले पछि परेको चेक गणतन्त्रले २ गोल फर्काएपछि क्रोएसिया र चेक गणतन्त्रको खेल बराबरीमा सकिएको छ। खेलको अन्तिम समयमा क्रोएसियाका समर्थकले मैदानमा पटखाहरु पालेपछि खेल केही बेर अवरुद्ध भएको थियो। पुन: शुरु भएको खेल पछि चेकले ९४औं मिनेटमा गोल गर्दै बराबरी गरेको थियो। खेलअवधिभर पुरै दबदबा क्रोएसियाको भए पनि दर्शकहरुको अभद्दर ब्यवहारका कारणले क्रोएसियाको खेलको लय बिग्रे पछि चेकले बराबरीको मौका पाएको थियो। खेलको ३७औं मिने ... बाँकी अंश»
स्विडेनलाई पराजित गर्दै ईटली नकआउट चरणमा
२०७३ असार ३ शुक्रबार, काठमाडौं। ईटलीका एडरको अन्तिम समयमा गरिएको गोलले स्विडेनलाई १-०ले पराजित गर्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने ईटली दोस्रो टोली भएको छ। फ्रान्समा जारी युरो २०१६को समुह 'ई'को खेलमा ईटलीले स्विडेनलाई पराजित गरेको छ। ८८औं मिनेटमा गरिएको गोलले ईटली बिजयी भएको हो। ५३% बल नियन्त्रणमा लिए पनि स्विडेनले गोल गर्न नसक्दा पराजित हुनु परेको हो। ईटलीले १५ फाउल गरेको थियो भने स्विडेनले १३ फाउल गरेको थियो। ईटलीले २ पहेंलो कार्ड पाएको थियो भने स्विड ... बाँकी अंश»
टर्कीले फुटबल पावर हाउस स्पेनलाई रोक्ला ?
२०७३ असार ३ शुक्रबार, काठमाडौं । विश्व फुटबल पावर हाउस मानिन्छ स्पेन । डेफेन्डिङ च्याम्पियन स्पेन यसपटकको मुख्य उपाधि दावेदार समेत हो । प्रतिष्ठित फुटबल क्लबको धनी स्पेनमा स्टार खेलाडीहरुको ठूलो जमात छ । दोस्रो विश्वकपका रुपमा लिइने युरोकप फुटबलमा फेरि पनि सन् २०१२ इतिकास दोहोर्याउने पक्षमा स्पेन छ । फ्रान्समा जारी युरोकपको समूह ‘डी’ मा रहेको स्पेन समूह चरणको आफ्नो दोस्रो खेलमा शनिबार विहान पौने १ बजे टर्कीसंग अ‍ेल्दै छन् । पहिलो खेलको शानदार जितले उत्साही ... बाँकी अंश»
‘फुटबल हेर्दै जुवा खेल्ने र दाउ हान्ने ठूला–साना कसैलाई छोड्दैनौं’: एसएसपी थापा
२०७३ असार ३ शुक्रबार, काठमाडौं । फ्रान्समा अहिले युरोपियन च्याम्पियनसिप युरोकप फुटबल जारी छ । जारी युरोकपमा कुन् राष्ट्रले कस्तो खेल्छन् भन्ने कौतुहल विश्वभर छ । यस्तै, नेपालमा पनि फुटबल समर्थकको कमी छैन । युरोकपले नेपालीलाई पनि निकै छोएको छ । यद्यपि, फ्रान्समा युरोकप हुँदा विभिन्न देशको समर्थनमा जुवा खेल्ने, दाउ हान्ने र सट्टेबाजी गर्नेहरुको खेलो समेत राम्रै चल्ने गर्दछ । जसमा फुटबलका समर्थक सामान्य नागरिक देखि व्यापारिक घराना र प्रतिष्ठीत व्यक्तिहरु समेत स ... बाँकी अंश»
चेक रिपब्लिक ३ अंकका लागि भौतारिँदै, क्रोएसियालाई रोक्ला ?
२०७३ असार ३ शुक्रबार, काठमाडौं । युरोकप फुटबलको समूह चरण नै रोचक बनेको छ । युरोकपको एक इतिहास चेक रिपब्लिक अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि अंक खोज्दै भौतारीरहेको छ । शुक्रबार राति पौने १० बजे क्रोएसियाविरुद्ध जित निकाल्दै अकआउट चरण पुग्नका लागि चेक निकै प्रयासमा हुनेछ । यो खेल जिते मात्रै चेकको यात्रा सहज हुनेछ । यद्यपि हाल सम्म यी दुई आपसमा दुई पटक भिड्दा दुबै खेल क्रोएसियाले कब्जा गरेको छ । क्रोएसियासंगको भेट पक्कै सहज हुने छैन । सन् २०११ को मैत्रपूर्ण खेलमा क्रोएसि ... बाँकी अंश»
ईटली बिरुद्ध स्विडेनलाई अंक ल्याउने दवाब
२०७३ असार ३ शुक्रबार, काठमाडौं। फ्रान्समा जारि युरो कप २०१६ फुटबल प्रतियोगिताको समुह 'ई' मा ईटाली र स्विडेन आमने सामने हुँदैछन्। उक्त खेल नेपाली समय अनुसार शुक्रबार साँझ ६:४५ बजे शुरु हुनेछ। पछिल्लो ११ खेलमा अपराजित ईटाली आज पनि ३ अंककालागि खेल्ने छ भने आफ्नो अन्तिम खेलमा आयरल्याण्ड बिरुद्ध अंक बाँडेको स्विडेन पनि ३ अंककाालगि नै मैदान उत्रिने छ। समुह चरणको दोस्रो खेलमा अंक बिहिन हुनु दुवै टोलीलाई दोस्रो चरणमा पुग्नाकालागि धक्का पुग्न सक्ने छ। दुवै टोली ... बाँकी अंश»
ओलम्पिक स्वर्ण ताकेको ब्राजिलियन फुटबलमा 'टिटे' नयाँ प्रशिक्षक
२०७३ असार ३ शुक्रबार, काठमाडौं। कोपा अमरिकाबाट कोपा पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको ब्राजिलले नयाँ प्रशिक्षकमा एडेनर लियोनार्डो बाखी 'टिटे'लाई नियुक्त गरेको छ। कोपा अमेरिकामा पहिलो चरणबाट बाहिरिएपछि ब्राजिलले प्रशिक्षक डुङ्गालाई बर्खास्त गरेको थियो। कोपा अमेरिकाको १०० बर्षको ईतिहासमा ब्राजिल दोस्रो पटक समुह चरणबाट बाहिरिएको हो। रियो ओलम्पिक २०१६ शुरु हुनु ५० दिन अघि फुटबल प्रशिक्षकलाई बर्खास्त गरिएको छ। नयाँ प्रशिक्षकले टोली सम्हाल्न समय लाग्ने छ। अ ... बाँकी अंश»
क्लिन्सम्यानको अमेरिका कोपा उपाधिमा आँखा लगाउँदै, ईक्वेडर पराजित
२०७३ असार ३ शुक्रबार, काठमाडौं। अमेरिका कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा प्रवेश गर्ने पहिलो टोली भएको छ। अमेरिकामा जारि प्रतियोगितामा अमेरिकाले ईक्वेडरलाई २-१ गोलले पराजित गर्दै सेमीफाईनलको यात्रा तय गरेको हो। जर्गन क्लिन्सम्यान म्यानेजर रहेको अमेरिका पहिलो पटक ठूलो प्रतियोगिताको सेमीफाईनलमा प्रवेश गरेको हो। क्लिन्सम्यान लामो समयदेखि अमेरिकाको टोली सम्हालिरहेका छन्। उनले अमेरिकी टोली सन् २०११ देखि सम्हालिरहेका छन्। क्लिन्सम्यानका अनुसार अमेर ... बाँकी अंश»
विश्व बिजेता जर्मनीसँग पोल्याण्डले अंक बाँड्यो
२०७३ असार ३ शुक्रबार, काठमाडौं। विश्व बिजेता जर्मनीले युरो २०१६को समुह चरणको खेलमा पोल्याण्डसँग बराबरी गर्दै १-१ अंक बाँडेको छ। पोल्याण्डका अर्काडिउस मिलिकले दोस्रो हाफको पहिलो मिनेटमा पो्याण्डलाई अग्रता दिलाउने सुवर्ण मऔका गुमाएका थिए। डि-बक्समा पाएको क्रसलाई हेड गर्ने क्रममा बललाई उनले बाहिर पठाएका थिए। मिलिकले यस्तो मौका बिरलै गुमाउने गरेका छन्। दुवै टोलीले लगातार आक्रमण गरेता पनि गोल भने हुन सकेन। बलमा नियन्त्रण जर्मनीले गरेको भएपनि गोल भने हुन स ... बाँकी अंश»
उत्तरी आयरल्याण्डले युक्रेनलाई हरायो
२०७३ असार २ बिहिबार, काठमाडौं। समुह 'सी'मा रहेको उत्तरी आयरल्याण्डले युक्रेनलाई २-० गोलले पराजित गर्दै युरो २०१६मा आफ्नो जितको खाता खोल्दै ३ अंक बटुलेको छ। खेलको ४९औं मिनेटमा गारेथ मकअउले गोल गर्दै आयरल्याण्डलाई अग्रता दिलाएका थिए। युक्रेनले गोल फर्काउने धेरै प्रयास गरेता पनि सफल हुन सकेन र खेलको ९०औं मिनेटमा नियाल मकजिनले दोस्रो गोल गर्दै आयरल्याण्डको जित सुनिश्चित पारेका थिए। मैदानमा परेको असिना पानीले खेल २ मिनेटकालागि रोकिएको थियो। युक्रेनल ... बाँकी अंश»
इङ्गल्याण्डको उत्कृष्ठ पुनरागमन, बेलले वेल्सलाई जिताउन सकेनन्
२०७३ असार २ बिहिबार, एजेन्सी । युरोकप फुटबलमा इङ्गल्याण्डले वेल्सलाई हराउँदै उत्कृष्ठ पुनरागमन गरेको छ । स्टेड बोलार्ट–डेलीमा भएको समूह बी को खेलमा इङ्गल्याण्डले बलियो वेल्सविरुद्ध २–१ को जित दर्ता गर्दैै उत्कृष्ठ पुनरागमन गरेको हो । पहिलो खेलमा रसियासंग १–१ को बराबरीमा रोकिएको इङ्गल्याण्डले जितसंग नकआउट चरणको बाटो तय गरेको छ । जितसंगै ४ अंक बटुलेको इङ्गल्याण्ड समूहको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ । ३ अंक बटुलेको वेल्स भने तेस्रो स्थानमा धकेलिएको छ । पहिलो ख ... बाँकी अंश»
३ अंकका लागि भिड्दै युक्रेन–आयरल्याण्ड
२०७३ असार २ बिहिबार, काठमाडौं । युक्रेन र उत्तरी आयरल्याण्ड दुबै पहिलो जितको जोजीमा छन् । समूह सी को खेलमा राति पौने १० बजे यी दुई आमने सामने हुँदा दुबै ३ अंक आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा हुने छन् । जो ३ अंक नकआउट चरण प्रवेश गर्नका लागि महत्वपूर्ण रहने छ । जित हासिल गर्न नसके दुवैले अंक बाँडेर भएपनि अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम गर्ने प्रयास गर्ने छन् । समूहको एक–एक खेल खेलेका दुबै अंकविहिन छन् । हेड टु हेड युक्रेन र उत्तरी आयरल्याण्डबीच हाल सम्म भएका कुल खे ... बाँकी अंश»
दोहोरो चेपुवामा इङ्गल्याण्ड, नकआउट चरणको ढोका खोल्ला ?
२०७३ असार २ बिहिबार, काठमाडौं । युरोकप फुटबलमा इङ्गलिश हस्ती इङ्गल्याण्ड दोहोरो दबाबमा परेको छ । विहिबार साँझ वेल्ससंग भिड्नु अघि इङ्गल्याण्ड नटआउट चरणमा प्रवेश गर्ने विषयले तनाबमा हुनेछ । यस्तै इङ्गल्याण्डलाई यो खेल जित्नैपर्ने दबाब छ । नभए समूहको अन्तिम खेलमा स्लोभाकियासंग भिड्दा समेत खेल गुमाउने सम्भावना बढी छ । पहिलो खेलमा वेल्ससंग २–१ ले हारेको स्लोभाकियाले समूहको दोस्रो खेलमा रसियालाई २–१ ले नै हरायो । जसबाट स्लोभाकिया नकआउट चरणलाई मध्यनजर गरी रक्ष ... बाँकी अंश»
रंगशालामै वितण्डा गर्ने ३६ फुटबल समर्थक पक्राउ, १६ अस्पताल भर्ना
२०७३ असार २ बिहिबार, एजेन्सी । फ्रान्समा जारी युरोकप फुटबलमा रसिया र इङ्गल्यान्डबीचको खेलका क्रममा झडप गर्ने र उदण्ड व्यवहार गर्ने ३६ जना पक्राउ परेका छन् । फ्रेन्च प्रहरीले पक्राउ गरेका मध्ये १६ जना अस्पताल भर्ना भएका छन् । फ्रान्सको लिलेबाट पक्राउ परेका उनीहरुलाई दंगामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले हिरासतमा लिएको बताइएको छ । गत वुधबार भएको समूह बी को पहिलो खेलमा रसिया र इङ्गल्यान्डले १–१ को बराबरी गरेपछि मैदान बाहिर र भित्र रुसी समर्थक र इङ्गलिश समर्थकह ... बाँकी अंश»
त्रिकोणीय श्रृखंला: ईमरान ताहिरको ७ विकेटले वेष्टईन्डिज परास्त
२०७३ असार २ बिहिबार, काठमाडौं। वेष्टईण्डिजमा जारि अष्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रिका-वेष्टईन्डिज सम्मिलित त्रिकोणिय क्रिकेट प्रतियोगिताको छैठौं खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले आयोजक वेष्टईण्डिजलाई छैठौं खेलमा १३९ रनले पराजित गरेको छ। ईमरान ताहिरको बलिङ र हासिम आमलाको शतक मदतले अफ्रिकाले वेष्टईण्डिज माथी सहज जित हात पारेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित ५० ओभरमा ३४३ रन बनाएको थियो। हासिम अमलाले ११० रन बनाएका थिए भने क्वाण्टन डेककले ७१ रनको य ... बाँकी अंश»
अन्तिम समयको गोलले फ्रान्स दोस्रो चरणमा, अल्बानिया स्तब्ध
२०७३ असार २ बिहिबार, काठमाडौं। फ्रान्सका एन्टोनी ग्रिजम्यान र डिमिट्री पायट अल्बानिया बिरुद्ध गरेको अन्तिम मिनेटको गोलले फ्रान्स युरो २०१६को दोस्रो चरणमा पुग्ने पहिलो टोली भएको छ। दुई केलबाट ६ अंक बटुलेको आयोजक फ्रान्स दोस्रो चरणमा पुग्ने पक्का भएको हो। पहिलो खेलमा रोमानियालाई हराएको फ्रान्स दोस्रो खेलमा अल्बानियालाई हराउन सफल भएको हो। पहिलो ११मा नपरेका एन्टोनी ग्रिजम्यानले ९०औं मिनेटमा हेड गर्दै गोल गरेका थिए। उनको गोल भन्दा अगाडी अल्बानियाको रक्षापंक ... बाँकी अंश»
स्विजरल्याण्ड र रोमानियाले अंक बाँडे, खेल बराबर
२०७३ असार १ बुधबार, काठमाडौ। रोमानिया र स्विजरल्याण्डले समुह 'ए' अन्तर्गतको खेल बराबरी गर्दै १-१ अंक बाँडेका छन्। खेलको १८औं मिनेटमा रोमानियाका बोगडन स्टान्कुले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफ सकिंदासम्म ०-१ले पछि परेको स्विजरल्याण्डले खेलको ५७औं मिनेटमा गोल फर्काएको थियो। एडमिर मेहमेदीले गोल गरेका थिए। तुलनात्मक रुपमा बलियो मानिएको स्विजरल्याण्डले केही राम्रा मौका गुमाउँदा तीन अंक पाउन सकेको थिएन्। स्विजरल्याण्डले ६१ ... बाँकी अंश»
स्लोभाकियाद्वारा रसिया स्तब्ध
२०७३ असार १ बुधबार, काठमाडौं। स्लोभाकियाले सनसनीपुर्न खेल खेल्दै रसियालाई २-१ गोलले पराजित गरेको छ। ईङल्याण्डसँग अन्तिम समयमा गोल गर्दै बराबरी गरेको रसियाले वेल्ससँग पराजित स्लोभाकियालाई हराउने अनुमान गरिएको थियो। खेलको ३२औं मिनेटमा भ्लादमिर वेशले गोल गर्दै स्लोभाकियालाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसैगरि ४५औं मिनेटमा मरेक हाम्सिकले दोस्रो गोल गर्दै स्लोभाकियालाई जितको बाटोमा पुर्‍याएका थिए। खेलको ८०औं मिनेटमा रसियाकालागि डेनिस ग्लिसाकोभले गोल ग ... बाँकी अंश»